आजको तस्वीर : संरक्षणको पर्खाईमा रिघाको ठुलोपोखरी ! – ebaglung.com
आजको तस्वीर : संरक्षणको पर्खाईमा रिघाको ठुलोपोखरी !
२०७५ जेष्ठ १७, बिहीबार ०६:२३	Footer Slider, Top News, अन्य समाचार, विविध
गुमानसिँह भण्डारी, गल्कोट २०७५ जेठ १७ । गल्कोट नगरपालिकाको रिघामा रहेको ठूलोपोखरी प्रत्यक वर्ष सुक्दै जान थालेपछी स्थानीयमा चिन्ता बढेको छ । आकाशबाट परेको पानी संग्रह गरेर वर्षभरीलाई पुग्ने यो ऐतिहासिक पोखरी पछिल्लो समय सुक्दै गएपछी (पानी नअडिएपछी) रिघाबासी चिन्तित बनेका हुन् ।
खानेपानीको चरम अभाव झेल्दै आएको रिघामा विस २०१३ सालमा तत्कालीन स्व.मुखिया मोतिप्रसाद श्रीसको सक्रियतामा गाँउमा नजिकै खानेपानीका श्रोतहरु नभएपछि मानिस तथा गाईवस्तुलाई पानीको समस्या टार्न पोखरी खनेर पानी संकलन गर्न थालिएको थियो । बैकल्पिक उपायको रुपमा स्व.मुखिया श्रीसको पहलमा १ सय ९२ बर्ग मिटर क्षेत्रफलका ठूलोपोखरी निर्माण गरिएको बुढापाकाहरुको भनाई छ । बर्षौ देखि हिउद र बर्खामा समेत पानी रहने यो ठुलो पोखरी २०७२ सालको भुकम्प लगतै पानी रित्तिदै गएको स्थानिय शेर बहादुर श्रीसको भनाई छ ।
यस मुहानरहीत मानवनिर्मित ऐतिहासिक पोखरीको संरक्षणका लागी वरपर पर्खाल समेत लगाईएको छ । पोखरीको संरक्षण र प्रर्वद्धनको लागि स्थानीय दीपक श्रीस र रामनाथ पुन लगायतको सकृयतामा बिभिन्न भौतिक संरचना निर्माण गरिएको छ । उनिहरुको सक्रियतामा आर्थिक संकलन गरी मर्मत सम्भारमा समेत गरिएको हो ।
गल्कोट नगरपालिका- ११ का अध्यक्ष डम्बर श्रीसका अनुसार इतिहास जोगाउन र अग्रज पुस्ताहरुले गाँउमा गरेका कार्यको सम्मान गदै ऐतिहासिक ठूलोपोखरीलाई जीवन्त राख्न गरेको युवाहरुको प्रयास पशंसनीय भएको भन्दै यसको संरक्षणका लागी वडाले बिशेष सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
यस ऐतिहासिक पोखरी मर्मत कार्यको लागि संसद विकास कोषबाट रु.२ लाख ५० हजार, जुनेली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट ६५ हजार, रिघा १ निवासी हाल रोजगारीको लागि कोरियामा कार्यरत टिका श्रीस र साबिक रिघा गाबिस वडा नं.का २ निवासी लोक श्रीसबाट सयुक्त रुपमा ५० हजार, यूकेमा रहेका रिघाली भाइवर ग्रुपबाट रु.१ लाख, गरि करिव रु. ४ लाख ६५ हजार बरावरको लागतमा पोखरीको पक्की पर्खाल निर्माण सम्पन्न गरिएको छ ।
पोखरीमा पानी हुदाँ उक्त स्थानमा पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको मन नै लोभ्याउने प्राकृतिक जलकुण्डको रुपमा हेर्दथे । पानी सुकेपछि स्थानिय समेत चिन्तित देखिएका छन । अधिकांश मगर समुदायको बाहुल्यता रहेता पनि रिघाबासी सबैको ठूलोपोखरी आस्थाको केन्द्र बनेको छ । पोखरीको विशेषता भनेकै हिउँद तथा बर्षा बाह्रै महिना कहिल्यैे पानी नसुक्ने हो । ठूलो जलासयको रुपमा राहेको यस सुन्दर जलकुण्डमा प्रत्येक बैशाखे पूर्णिमा र जनैपूर्णिमाको दिन उत्तरगंगा बराहको पूजा आराधना गरिदै आएको छ ।
रमणीय रिघाको उच्च शिखरमा सुन्दरताको प्रतिक बनेको ‘ठुलोपोखरी’ संरक्षणको पर्खाईमा छ । यस ऐतिहासिक ठुलोपोखरीको संरक्षणमा गल्कोट नगरपालिकाको ध्यान केन्द्रित भएको स्थानीयबासीले विश्वास लिएका छन् ।
‘विश्वस्त नहुने त कुरै आउँदैन, एक रिघालीले यस हरफकारलाई भनेका थिए, ‘यसै गाउकी छोरी गल्कोट नगरपालिकाकी उपप्रमुखमा पदासीन छन् । उनले यस ऐतिहासिक ठुलोपोखरीको संरक्षणमा अवश्य पहल गर्छिन् ।’